लागुऔषध कारोबारीसँग यति धेरै सम्पत्ति ! हङ्कङ र जापानका बैंकमा खाता « Deshko News
लागुऔषध कारोबारीसँग यति धेरै सम्पत्ति ! हङ्कङ र जापानका बैंकमा खाता
काठमाडौं, फागुण १५
लागुऔषध कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका काठमाडौं सीतापाइलाका देवेन्द्र छपाली मगरको एक अर्ब सम्पत्ति भेटिएको छ । लागुऔषध कारोबारबाटै देवेन्द्रले अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निष्कर्ष छ ।
देवेन्द्र तीनपटक जेल बसेर छुटेका व्यक्ति हुन् । पछिल्लोपटक २३ वैशाख ०६९ मा उनलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । त्यसवेला उनीसहित तीनजना एक सय ३६ किलो चरेससहित पक्राउ परेका थिए ।
देवेन्द्रले सीतापाइलास्थित आफ्नै घरमा चरेसको गोदाम राखेको प्रहरी अनुसन्धानमा भेटिएको थियो । उनको हङकङ र जापानका बैंकमा खाता रहेको त्यतिवेलै प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । लागुऔषध कारोबारको पैसा तिनै खातामा जम्मा गर्न लगाउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । देवेन्द्र त्यतिवेला दुई वर्ष जेल बसेर छुटेका थिए ।
०३९ मा पहिलोपटक पक्राउ परेका उनी ०४२ मा पनि खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए । उनी ०३४ देखि चरेस कारोबारको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा आबद्ध भएको भेटिएको प्रहरी अधिकारीले बताए ।
देवेन्द्रले सिरक व्यापारको आवरणमा चरेसको कारोबार सुरु गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । उनी भारत हुँदै क्यानडासम्म चरेस पठाउने गर्थे । अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँग उनको सम्पर्क देखिए पनि प्रहरीले खोतल्न सकेको थिएन ।
क्यासिनोको एक करोड बरामद
एक करोड नगदसहित पक्राउ परेका श्रवणकुमार चौधरीमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बरामद पैसा क्यासिनोको भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
चौधरी २ फागुनमा झापाको काँकडभित्तामा पक्राउ परेका हुन् । बा।१२च ९६८ नम्बरको कारमा एक करोड नगद बोकेर उनले भारत लैजान खोजेको खुलेको छ । चौधरीलाई थुनामा राखेर विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा कुनै समूहले उनलाई पैसा बोकाएर कसैलाई दिन पठाएको र यसमा आपराधिक गिरोह संलग्न हुन सक्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका